မောင်ဒိုင်း၏ သရော်စာများ: ပန်ကြားပါသည် (၇) ရက်သားသမီး စိတ်ချမ်းသာဖို့
(တွဲဖတ်ရန် -ပန်ကြားပါသည် စာဖတ်သူများသို့)
ကျွန်တော်လဲ အခုတလော ဘလော့ဂ်မရေးရဲဘူး..ကျောင်းနဲ့ပလက်ဖောင်းကူးပြီး မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလို တပ်ပြန်ဖို့ အရေး တွေးကြောက်နေတယ်..တချို့ကတော့ အမြီးထောင်နိုင်ရင် ထောင်ပါအုန်းလို့ပြောတယ်..တချို့ကျတော့လဲ သူတို့ကိုကြောက်သွားလို့ ပြန်မရေးနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတယ် (အမှန်တွေ မပြောကြပါနဲ့..အမှန်တွေကြားရင် အဖျားဝင်တတ်တဲ့ ရောဂါ ဆိတ်ဗိုလ်မှာ ရှိတယ်)..ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ပြန်ရေးဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ လာရေးတဲ့ Comment တွေတောင် မဖတ်ရဲတော့တာတော့ အမှန်ပဲ…(စရေးတုန်းက အခုသူတို့ထောက်ပြထားတာတွေ မတွေးမိလို့ပါ ခမျာ…တက်ချုပ်ကြီး အော်ဒါပေးတဲ့အတိုင်း….အဲလေ…သြ၀ါဒပေးတဲ့အတိုင်း သံယောင်လိုက်တာပါပဲ..။) ကြိတ်စုထားတဲ့ ဒေါ်လာလေး ဘယ်လောက်ရပလဲ ရေနေရတာနဲ့ကို အချိန်ကုန်နေရတယ်ဆိုတော့ ကျန်တာတွေ စိတ်မ၀င်စားနိုင်သေးဘူး..
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်းကောင်းကြီးဆော်ပလော်တီးနေတဲ့သူတွေကလဲ တပုံတခေါင်းကြီးပေါ့.. (အမှန်တော့ ကျနော်နေ့တိုင်း အဆောင်တံခါးပိတ်ပြီး ခိုးဖတ်ပါတယ်။) မခံနိုင်တဲ့သူတွေက ပြန်ပြောကြတယ်…(ဆိတ်ဗိုလ်နေလင်းကြောင်..မင်းဟာမင်း `ခံ´တဲ့။) …ပို့စ်အသစ်တင်ပြီး ပြန်တိုက်ခိုက်လို့ ပြောကျတယ်…(ခင်ဗျားတို့ မြှောက်ပေး..အခု ကျုပ်ခံရတာ ချာလပတ်ကို ရမ်းနေပြီ)….ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့ဒေါ်လှပြားလောက် ဘယ်အရာမှ အရေးမကြီးဘူး..ယောင်္ကျားဖြစ်ပြီး မိန်းမပါးစပ်တွေလို အပုတ်ချအတင်းပြောလဲ ပြောကျပေါ့……(ကျုပ်က စပြောခဲ့တာ..အခုထိ အဲလိုပဲ..မယုံရင် ဘားမားတူဒေးမှာ သွားဖတ်၊ `ဝေဖန်စာတစ်စောင်´ဆိုလား အဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ထားတယ်။ ကျုပ်က ပိုင်အိုးနီးယားပါဗျ…ငှဲ..ငှဲ..) သူတို့တွေက ကျွန်တော့ဖွက်ယူဒေါ်လာလောက် အရေးမကြီးတော့လဲ အိတ်ထောင်ထဲတောင် မထည့်ပါဘူး…..
ကျွန်တော့ကို တိုက်ခိုက်ရမှ ဟမ်ဘာဂါစားလို့ဖြောင့်မယ်ဆိုလဲ ဆက်သာဘီယာနဲ့ မျောချကြတော့..ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်အကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်၊ ဘ၀ပျက်မဲ့ကိစ္စတွေကို လုပ်မိနေပြီဆိုတော့လဲ ရှေ့တိုးတော့လည်း ထမ်းပိုး နောက်ဆုတ်တော့လည်း သန်းရွှေဒုတ် (ရိုက်တဲ့ ဒုတ်ပြောပါတယ်။) ဆိုတော့ ပြန်ကိုက်မနေတော့ဘူး..စီနီယာတစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားလေး သွားသတိရမိတယ်..လမင်းကြီးကို ခွေးဟောင်တယ်တဲ့..ခွေးသာဟောင်ရင်းနဲ့ သေသွားမယ်.လမင်းကြီးကတော့ ပုံမပျက် လင်းနေအုန်းမှာပဲ….(အဲဒါ မင်းရဲ့ စီနီယာက ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ မဃဒေ၀ကျမ်းပြုအကျော် မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကဗျာဟဲ့..ငကြောင်ရဲ့…မင်းစီနီယာ ပါးစပ်ကိုများ နတ်စကား ထွက်တယ်မှတ်နေလား..မင်းတို့ အဲဒါခက်တာပေါ့…သန်းရွှေ လေလည်တာလောက်ကို အမြှောက်သံထင်နေတဲ့ ဂျိုကုပ်ကလေးတွေ..မနိုင်ရင် မနိုင်ဘူးပေါ့…စစ်သားပီပီ လက်နက်ချရင်ချတယ်ပေါ့….နောက်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ် အဲဒီ `လမင်းကို ခွေးဟောင်လို့၊ ရွှေလရောင် ပြောင်မပျက်တယ်၊ ထွန်းလျက်ပင်သာ´ ဆိုတဲ့ ကဗျာက စုံမှိတ်ပြီး အော်ချင်ရာ အော်နေတဲ့ မင်းတို့ဖတ်ဖို့ကွဲ့…ကြားလား…နောက်ပြီး ဟိုနောက်ပေါက် ဂျိုယားလေး န.အာ.ဖ ကိုလည်း ပြောလိုက်ဦးမယ်..လေးဖြူတို့ အငဲတို့ မျိုးကြီးတို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေက နင်တို့ကို ဆုံးမနေတာ…ဒါပေမဲ့လည်း နွားကို ဂစ်တာတီးပြမိသလို မင်းတို့ကတော့ စကားခေါက်ခက် အ၀င်နက်ပါဘိ…အေးလေ..အ၀င်လည်း နက်လောက်ရောပေါ့..)
အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ခံစရာရှိတာကို လှိမ့်ပိန့်ခံနေတုန်းဆိုတာ ပြောလိုက်ချင်တယ်..ပြောချင်တာတွေ ပြောချင်တိုင်း ပြောနေတဲ့သူတွေကတော့ သူတို့ပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ သူတို့အဆင့်အတန်းတွေကို ဖော်ပြမှန်းမသိအောင် ပြောဆိုနေကြတာ.. သေချာတွေးကြည့်တော့ ယောင်္ကျားတွေလဲ အတင်းပြော အပုတ်ချတတ်တယ်ဆိုတာတွေ မြင်လိုက်ရသေးတယ်….(ကျနော် နေလင်းကြောင် ထိပ်ကပါပဲ…နိုင်ငံနဲ့ချီပြီး အပုတ်ဆန်အောင် ပြောနေတာ…)
စိတ်တော့မနှံ့တော့ပါဘူး..ဒါကလဲ မွေးရာပါဆိုတော့လဲ ကျနော့်ကို မတားကြပါနဲ့..အဲဒီတော့ အရှုံးပေးပါပြီ..ပြောချင်တဲ့သူတွေ ဆက်ပြောပြီး ထမင်းလေးဝအောင် စားကြတော့…..ကျွန်တော်ကတော့ ဖွက်ယူဒေါ်လာအတွက်ပဲ အငတ်ခံနေတော့တယ်…(ဖွက်ယူဒေါ်လာလို့ ပြောရတာက မဖွက်ရင် အိမ်အပြန် ရုရှလေဆိပ်မှာ သိမ်းလို့ပါ ခမျာ)..အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတော့ အကူသိုလ်လဲများ၊ စာဖတ်သူလဲ ၀ိုင်းဆဲကြမယ့် ပို့စ်လေးတွေ၊ ကျွန်တော် `နွားလိုက်အော့ဖ်မြန်မာ´တို့၊ `ကြေးမှုန်´တို့က ကူးထားတာလေးတွေ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ..ကျောင်းကနှင်ထားတဲ့ရက်တွေကလိုတော့ အားတိုင်းယားတိုင်းပို့စ်အသစ် မတင်နိုင်တော့တာ (၇) ရက်သားသမီး စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပန်ကြားပါတယ်…
(မင်းရေးတာ ဖတ်ဖတ်ပြီး `ရီချင်တယ် ကြည်ခင်ရယ်´၊ `ရီသေးတယ် ကြည်အေးရယ်´လို့ပဲ ပြောချင်တာပဲ။ မင်း…ဘလော့ဂ်လည်း တစ်ခါ ဖျက်လိုက်ရပြီးပြီ။ ဒါလည်း အမှတ်မရှိဘူး။ အခုထပ်ရေးပြန်တော့လည်း မင်းရဲ့ Comment နဲ့ စီဘောက်တွေမှာ မြင်မှာပေါ့။ Comment အားလုံးအခု ၂၀ ကျော်လောက်ဖတ်တာမှာ မင်းရေးတာ ထောက်ခံတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါရင် မင်းစာသင်ဆောင်ပေါ်က ဂျွမ်းသာထိုးချလိုက်။ ခက်တာက အဲဒီ ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ခုကလည်း နအဖ ရဲ့ ထောက်ခံပွဲတွေလို မင်း ကိုယ့်ဘာသာ လံကြုတ်ပြန်ရေးရတာဆိုတော့ ဘယ်ပျော်နိုင်လိမ့်မလဲ။ အားလုံးက ကန့်ကွက် ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းတာနဲ့တင် မင်း အမြီးကုပ်ပြီး ဘလော့လောကကနေ အောင်ဖျာလိပ်သင့်ပြီ။
မင်းကို လာရောက်ပြောပြဆုံးမနေတာ မင်းနဲ့ရွယ်တူတွေတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်တူရင်တောင် မင်းထက် ဥာဏ်သက်တော့ ရင့်ကြတယ်။ စွေစောင်းဘလော့ဂ်နဲ့ ဆက်မရေးရဲလည်း အသစ်တစ်ခု လုပ်ပေါ့။
အစတော့ မင်း မျက်နှာများရမလားလို့ နအဖအာဘော်တွေ လျောက်ရေးနေပြီး စကားထဲက ဇာတိပြတာတွေ၊ စကားကျွံပြီးနုတ်မရတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အခုတော့ မင်း တပ်ကိုပြန်ရင် မျက်နှာမရပဲ ခြေထောက်ထက်ဆိုးတာ ရတော့မယ်။ မင်းလုပ်တာ၊ ဗရမ်းဗတာ ပြောတာတွေ ရုရှက မြန်မာသံရုံးက၊ နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်က မသိဘူးထင်လို့လား။ မင်းလိုဖားချင်တဲ့ကောင် မှင်နီတွေရဲပြီး ဖင်အသားနီလန်ဖို့ပြင်။ နအဖ အာဘော်အတိုင်း၊ ဂျပုကျော်ဆန်းလေအတိုင်း လျှောက်ပြော။ သူတို့ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံကပြောနေတာ တဖက်သတ်ဆိုတော့၊ ခွေးတောင် အအိပ်မပျက်သလို ဘယ်သူကိုမှလဲ ရှင်းချက်ပေးစရာမလိုဘူး။ မင်းလည်းပြောရော လာသမျှ၊ ဝေဖန်သမျှ ဘာမှ ပြန်မချေနိုင်၊ ထပ်မပြောနိုင် ဖြစ်တော့တာကိုး။
မင်းသိဖို့ရာက နအဖ ပြောသမျှ သတင်းစာက အီအီးကုံးဖို့လောက် အသုံးဝင်တာ၊ နိုင်ငံတကာ ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာပေါ်မျိုးလာတင်လို့ မရဘူး။ မင်းဦးနှောက်ကလည်း နအဖ (နင့်အဖေ) သင်မထားရင် ဘာမှ ပြောတတ်တာမဟုတ်။ မင်းအပါအ၀င် ဇော်မျိုးတို့၊ သာဂိန်တို့၊ န.အာ.ဖ တို့ကို ငါ ရေးရပြောရတာကလည်း နူရာဝဲစွဲ လဲရာသူခိုးထောင်းဆိုတာလို ဖိချည်းထောင်းနေရ၊ ခွေးပိန်လေး ချောင်ပိတ်ကန်နေရသလို တကိန်ကိန်ဖြစ်နေတော့ တခါတလေတော့လည်း သနားတယ်။ ဒါပေမယ့် မချိသွားဖြဲ လာလာလုပ်တော့ နံကြားကန်ပစ်ရတာပဲ။
ကိုယ်လုပ်စရှိတာလုပ်၊ ဗွက်က အချိန်တန်ရင် ရုရှကပေးလိုက်မှာပဲ။ ဒေါ်လာလေးရသလောက်ဖွက်သွား။ အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်မနေနဲ့။ တွေးမိပြီး ရင်ပူလာရင် အပြင်ထွက်ပြီး နှင်းလွှာပေါ် မှောက်အိပ်ချေ။)
အားတဲ့အချိန်မှာ ရုရှားမြို့ပြသ ပလက်ဖောင်းအကြောင်းလေး ရေးတင်ပေးပါမယ်..အဖေမပေါ်တဲ့ ကလေးများအတွက် ဗဟုသုတတစ်ခုပေါ့
Posted by dms at 9:10 PM
Labels: သရော်စာဆော်စာ, စွေစောင်း
Brother....Thanks so much!..Now I do not need to open the Na-ar-pha, oppositeye, thatkinwe, newlight. Because I have known all information from your blog....Thanks. We are always beside you. "Our Blood Are Really Red".......
Now..the best blog I like is yours.
ကောင်းတယ်ဗျို့.. စွေစောင်းလေးအရေခွံမှရှိသေးရဲ့လား! အသနီလန်နေလောက်ပြီ။
Fight for Armydog said...
သတင်းစာချီးကုန်းဖို့လို့ပြောလို့ပါ သတင်းစာသည် ချီးကုန်းရင်တောင်ဖင်မဲပါသည် စာမှစောက်သုံးမကျရတဲ့အထဲ အမျိုးအစားကလည်းစောက်သုံးမကျပါကြောင်း
Good good.....very good. I like your blog. Your blog is the best.